samsung – SoShwe
အကောင်းဆုံး ဖန်သားပြင် Experience ကိုရယူပြီး ငွေကျပ် ၅သိန်း အထိငွေသားလက်ဆောင်ရယူနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကြီးကို Samsung Myanmar က ယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ . . . ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အသင့်တော်ဆုံး UHD TVs တွေအတွက် ငွေသားလက်ဆောင် ပြန်ရမယ့် Built For Myanmar TV promotion အစီအစဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် . . . Internet နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး တခါတည်းကြည့်ရှုနိုင်မယ့်အပြင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ AU7000 series တွေကို ၇၀၀,၀၀၀ကျပ် ဝန်းကျင်ကနေ စတင်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်လို့ Promotion အမှီ နီးစပ်ရာ Showroom မှာ …
မကြာခင် လက်ထပ်တော့မယ့် ချစ်သူလေးတွေရော၊ လက်ထပ်ပြီးခါစ ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံလေးတွေအတွက်ရော Samsung က ပေးအပ်မယ့် မေတ္တာလက်ဆောင်အစီအစဉ်။
Samsung က ချစ်သူလေးတွေအတွက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Partners For Life အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပြီး Novotel Hotel ရဲ့ One Night Stay နဲ့ Dinner Package လေးကို လက်ဖွဲ့အနေနဲ့ ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေး ရှိတယ်နော်။ ဒီအစီအစဉ်လေးမှာ ပါဝင်မယ်ဆိုရင် ၁။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်တူတူရိုက်ထားတဲ့ Couple ပုံလေးကို Public နဲ့ တင်ပါ။ ၂။ တင်တဲ့အခါမှာ နှစ်ယောက်ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ Romantic အမှတ်တရလေးကိုရေး။ ၃။ #SamsungWedding #PartnersforLife ဆိုတဲ့ hashtag လေး ၂ခုကိုထည့်။ ၄။ post အောက်မှာ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ post ရဲ့ …
5G ထက် ပိုမြန်မယ့် 6G ကွန်ယက်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု။
Samsung Electronics ဟာ နောက်မျိုးဆက် ကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးစံဖြစ်လာမယ့် 6G အတွက် စီမံကိန်းတွေ ချပြလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ရဲ့ 6G စာတမ်းသစ်ကို 6G Spectrum: Expanding The Frontier လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ Samsung အမှုဆောင်ဒုဥက္ကဌနဲ့ အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးသုတေသနစင်တာ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Sunghyun Choi က “6G ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကို နားလည်ဖို့ ၊ ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ စံသတ်မှတ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဟိုးအရင်ကတည်းက စတင်လာခဲ့တာပါ။ လူ့ဘဝရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာ ပိုပြီးသာလွန်တဲ့ ချိတ်ဆက်မှုအတွေ့အကြုံတွေ ပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကို မျှဝေသွားမှာ ဖြစ်သလို ဒီအပေါ်မှာလည်း ဦးဆောင်လေ့လာမှုလုပ်သွားဖို့ ကတိပြုထားပါတယ်။” လို့ ဆိုပါတယ်။ …
မြန်မာနိုင်ငံစမတ်ဖုန်းစျေးကွက်မှာ နေရာယူလာပြီဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီများ။
April 20, 2022	Tech 0
စျေးသင့်တင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားတွေ မြန်မာနိုင်ငံစမတ်ဖုန်းစျေးကွက်ထဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်လောက်ကတည်းကနေ စုပြုံပြီး ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ခေတ်မီဒီဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးတစ်ရပ် ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့တာကို အားလုံးမြင်တွေ့ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Huawei ၊ Apple နဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီတို့ဟာ တိုးတက်မှုမြန်ဆန်လွန်းလှတဲ့ စျေးကွက်ထဲမှာ နေရာယူဖို့အတွက် အပြိုင်အဆိုင် ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Xiaomi ၊ Huawei နဲ့ Oppo ကုမ္ပဏီတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်ထဲကို တဖြည်းဖြည်းဝင်လာခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ စျေးကွက်ထဲမှာ ၆၆% လောက် ရှယ်ယာတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြပါပြီ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 3rd Quarter မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ …